प्रकाशित मितिः असार, 5, 2076
काठमाण्डौ / बिहीबार देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । मनसुन भित्र्याउने वायु देशको पूर्वी भूभागमा सक्रिय हुन थालेकाले देशको पूर्वी तथा मध्य भागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मनसुन भने अझै पनि भित्रिएको छैन । पूर्वी भूभागबाट मनसुन भित्र्याउने वायु प्रवेश गरेकाले मनसुनी गतिविधि बढेको हो ।’ महाशाखाका मौसमविद् वरुण पौडेलले भने । उनका अनुसार बिहीबार पश्चिम तराई र काठमाण्डौसहित मध्य क्षेत्रमा दिउँसो मौसम सफा भए पनि बेलुकीतिर भने पानी पर्ने संभावना छ ।
मनसुन सुरु हुने संकेत देखिन थालेकाले अब बिस्तारै तापक्रम घट्दै जाने मौसमविदहरुले बताएका छन् । पछिल्लो साता काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशभरिको तापक्रम बढेको थियो । तापक्रम वृद्धि भएपछि तराईको जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।
गएको साता शुक्रबार काठमाण्डौको अधिकतम तापक्रम ३३.५ डिग्री सेल्सियस पुग्यो । उपत्यकामा यो तापकक्रम वर्षकै सबैभन्दा धेरै हो । गएको सोमबार दिउँसोदेखि आंशिक तथा सामान्य बद्ली भएर बेलुका पानी परेपछि तापक्रम केही मात्रामा घट्दै गइरहेको छ ।
नेकपाको चियापानमा के–के भयो चर्चा ?
सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु, उत्साहित बने धौलागिरिबासी
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक
मान गुमाउँदै माननीयहरू !
सरकार भन्छ, बर्जर टेर्दैन :लिड मात्र होइन, अति घातक भीओसीको प्रयोग
सिंहदरबारभित्रै ‘कामचोर’ कर्मचारी : उच्च तहका कर्मचारी नै गर्दैनन् समयको पालना
सञ्चारकर्मीले आफ्नो शिष्टता र मर्यादा बिर्सिए : प्रधानमन्त्री ओली
आगोको भट्टीजस्तो पृथ्वी कसरी सेलायो?